Teknolojia · Desambra, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Teknolojia · Desambra, 2008
Tantara mikasika ny Teknolojia tamin'ny Desambra, 2008
Malawi 13 Desambra 2008
Nahita lalana iray hanatsarana ny asany ilay mpanadio kiraro Juan Luna izay manana ny toera-piasany any afovoan'i Monterrey, Meksika. Noho ny fanampian'ny namany iray dia namoaka lahatsary tao amin'ny YouTube izy hampisehoany ny fahaizana manokana fa samy manadio kiraro andaniny sy ankilany anatin'ny fotoana iray ny tanany havanana sy havia samy misy borosy. Valin'izany, nitombo ny isan'ny mpividy ny asa izay te-hijery mivantana ilay mpanadio kiraro mihitsy. Nampiresahin'ny mamaham-bolongana Issa Villarreal momba ny dokambarotra ataony ary i Luna.
Kroasia 06 Desambra 2008
Misy vondrona iray antsoina hoe :"manao fanamby aminareo aho fa hahita mpampiasa 5000 tsy tia an'i Sanader ianareo!" niforona tao amin'ny Facebook hitsikera ny praiminisitra Kroaty Ivo Sanader. Ho fanampin'ny nitazonan'ny polisy ny mpamorona izany vondrona izany dia nandrisika ny olom-pirenena hahatsapa fa tandindonin-doza ny fahafaha-miteny izany.
Kiobà: niteny ny mpamaham-bolongana ny mpiasan'ny governemanta hanafoana ny fihaonany
Amerika Latina 05 Desambra 2008
Ahiana hofoanan'ny fitondrana mahefa any Kiobà ny fihaonan'ny mpamaham-bolongana, efa nokarakaraina ho am-bolana izay ary 25 no efa nilaza ny hanatrika izany, izay kasaina hatao ny 6 desambra (sabotsy) ho avy izao satria heverina ho "manohitra ny revolisiona" (contre-révolutionnnaire). Izany vaovao izany moa dia notsoahina avy tamin'ny dinika nifanaovan'ny mpiasan'ny minisiteran'ny atitany sy ilay mpamaham-bolongana malaza indrindra ao amin'ny nosy dia i Yoaní Sánchez avy ao amin'ny Generación Y izay natao tao amin'ny paositry ny polisy.